सात र तीनबुँदे सहमतिको प्रयास असफल ! संघीय गठवन्धन प्रचण्डसँग शशंकीत | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
सात र तीनबुँदे सहमतिको प्रयास असफल ! संघीय गठवन्धन प्रचण्डसँग शशंकीत
१८ साउन, काठमाडौं । मंगलबार दिनभरको वार्तापछि पनि सरकार गठनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेस-माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनबीच असहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।
नेताहरुका अनुसार वार्ताका क्रममा तीन वटा सहमतिको मस्यौदा समेत बनाइएको थियो । तर, सहमति नभएपछि भोलि हुने प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी मोर्चाले कांग्रेस माओवादीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डलाई मत दिने नदिने अन्यौल भएको छ ।
यद्यपि प्रचण्डको उम्मेदवारीमा मधेसी मोर्चाका तीन नेता आफैं समर्थक बसेका छन् ।
नारायणकाजीको तीनबुँदे प्रस्ताव
बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यति धेरै किन सहमति गर्ने भन्दै तीनबुँदे प्रस्ताव राखे । जसमा संघीय गठवन्धन/मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरुका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने तत्काल गर्ने, अन्य मागका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन लगायतका आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
उनकोे मौखिक प्रस्तावमा नेताहरु सहमत देखिए । र, उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सहमतिलाई लिपिवद्ध गरेर हस्ताक्षर गर्ने भन्दै नेताहरु उम्मेदवारी दर्ताका लागि गए । गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, सर्वोन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थक बसे ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तीन पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको त्यहाँ रहेका सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए ।
फेरि विवाद भो
उम्मेदवारी दर्ता गरेर फर्किँदा करिव सवपा १ बजेको थियो । माओवादी नेता श्रेष्ठ कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मा लगाएर बाहिरिए । महराले २ बजे बैठक बस्ने प्रस्ताव गरे ।
तर, नेताहरु आउँदा ३ बज्यो । वार्तामा तीनबुँदेलाई लिपिवद्ध गर्न विमलेन्द्र निधि, महरा, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णसहितका नेताहरु बसे । तर, सहमति जुटेन ।
मोर्चाका नेताहरु सहमतिमा प्रदेशको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने उल्लेख गर्नु पर्ने माग राखे । तर, कांग्रेस र माओवादी नेताहरु सहमत भएनन् । त्यसको विकल्पमा मोर्चाका नेताहरु आफूहरुले उठाएको ११ र २६ बुँदेलाई उल्लेख गर्नु पर्ने भनेपछि फेरि शीर्ष तहमै छलफल गर्नु पर्ने भयो । शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइए पनि पुगेनन् ।
र, मोर्चाको दुईबुँदे प्रस्ताव
शीर्ष तहमा सम्वाद हुन नसकेपछि मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । माओवादी र कांग्रेसले कतै आफूलाई वेवास्ता गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका गरेका छन् ।
मोर्चाका नेताहरुले त्यहाँ नै दुईबुँदे प्रस्ताव तयार पारे । जसको पहिलोबुँदामा नै मोर्चाको ११ र गठवन्धनको २६ बुँदे मागका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने र दोस्रोबुँदामा घाइतेको उपचार खर्च, सहित घोषणा लगायतका विषय राखिएको छ ।
यो प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरु समक्ष पुगेका छ । तर, उनीहरुले त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै भोलि विहान ८ बजे बैठक बस्न प्रस्ताव गरे ।
मोर्चाका एक नेताले भने, एक मात्र उम्मेदवारी परेपछि उहाँहरुको बडी ल्याङ्गोइज चेन्ज भएको छ । अब सहमति हुने नहुने ५०/५० को अवस्थामा आइपुगेको छ ।’